Ingabe uwoyela inhlanzi eyigugu ibhekwa wezokudla, aqukethe amavithamini abalulekile ezifana E, D no A. Kodwa-ke, yezingxenye ezibaluleke kakhulu futhi ewusizo kwalo mkhiqizo eqinisweni omega 3. Lokhu zokuvimbela kakhulu izifo eziyingozi ezifana nesifo sohlangothi, isifo sokuqina kwemithambo yegazi kanye infarction. Ayikho ngaphansi umusa futhi ube acid okunamafutha e inqubo yentuthuko ezingokwengqondo ingane. Ngaphezu kwalokho, bayakwazi ukulawula izivikeli mzimba ukunciphisa amathuba asathuthuka izifo sokuhlasela kwamasosha omzimba futhi ukwandisa amakhono ayo ukuzivikela izifo ezihlukahlukene. Futhi lokho ngeke zonke izinzuzo uwoyela inhlanzi, elisemnyango reception lesifanele ungakwazi ukuxazulula izinkinga eziningi zempilo.
Obani cod uwoyela kwesibindi kuyinto esisemqoka?
Umphumela omuhle ukuthatha namafutha kafishi okuye kungase kutholakale hhayi kuphela inani elikhulu izifundo zokwelapha, kodwa eside ukusetshenziswa esiwusizo. Ngakho, eliqukethe i-omega-3 uwoyela inhlanzi ikakhulukazi kuboniswe ngoba izigaba ezilandelayo abantu:
Unezinkinga esimiso senhliziyo nemithambo yegazi;
Izingane enisezweni esiteji asebenzayo ukuthuthukiswa kwama-hormone;
Labo nezifo sokuhlasela kwamasosha omzimba.
Yiziphi izinzuzo uwoyela inhlanzi kweqiniso?
Kuyinto ngenxa ukwakheka eziyingqayizivele namafutha kafishi kunezinzuzo eziningi:
Lapho senza ethile namafutha kafishi kungaba kunciphise umfutho wegazi.
With ukusetshenziswa njalo kwalo mkhiqizo kungaba ngokuphawulekayo kuncishiswe amathuba okuvela ezifana isifo esiyingozi njengoba umdlavuza webele kanye nezinye izimila imvelo oncological.
Rich e-fatty acid, uwoyela inhlanzi, uyakwazi ukwehlisa egazini ngu 35% lizinga triglyceride, nakho kunciphisa amathuba nesifo senhliziyo.
Ngenxa izinhlanzi uwoyela intuthu abantu ongavikela emaphashini akhe kusukela okuvela ne-emphysema.
Abantu abaphethwe isifo samathambo amalunga omzimba, lo mkhiqizo kuzosiza ekunciphiseni izinhlungu futhi ngcono ukuhamba.
Iyatholakala njengengxenye izingxenye namafutha kafishi nethonya elihle ku isimo isikhumba, kuyilapho lula ngisho ukubonakaliswa psoriasis.
Phakathi ayimigodi ukuthi umkhiqizo yilona khambi kwaphumelela kakhulu, ngenxa yokuntuleka emzimbeni enkathini fatty acid kanye serotonin kabani ezingeni ukwanda kanye lo mkhiqizo.
Phakathi sokukhulelwa ethola namafutha kafishi kuzovumela uhlelo wengane kwemizwa ukuze zikhule kahle.
Esimweni ukucindezeleka edonsa namafutha kafishi iyehlisa ulaka, kanye eqeda ingozi spasm kwemithambo yegazi yenhliziyo.
Namuhla, uwoyela inhlanzi zingaba ewuketshezi noma ngesimo amaphilisi. abakhiqizi Domestic asetshenziselwa ukukhiqiza yayo izinga okusezingeni kakhulu izinto zokusetshenziswa, eye preliminarily bahlanza. Ngaphezu kwalokho inkampani "ODAS Pharma" unikeza ukuthenga umkhiqizo elinjalo, ephelele izithelo iphunga nokunambitheka okungefani, ngamafutha izinhlanzi ngokwayo akaphelelwa izakhiwo zalo zenani elikhulu. Ngenxa lokhu kuhlukahluka ngokunikeza imikhiqizo kuyinto ibhekwa emangalisayo ewusizo ngeke kube yinkinga ukunikeza izingane ngisho encane.
Kuleli Site: http://norwegianfishoil.ru/